Waa maxay qabowga dabaysha sideese loo xisaabiyaa? | Saadaasha Shabakadda
Waxaan wada maqalnay hadal ama khubarada saadaasha hawada, barnaamijyada moobiilka ee noo sheegaya cimilada ama si fudud dhaqanka guud, in "waa heer-kul sidan oo kale ah oo leh dareen kuleyl leh." Taasi dareen kulul way ku kala duwanaan kartaa ama ku kala duwanaan kartaa heerkulka dhabta ah ee aan joogno.
Runtii ma ognahay waxa ay tahay qabowga dabayshaasi iyo sida ay tahay ma khubarada saadaasha hawada ayaa xisaabisa?
Xilliga jiilaalka ama xagaaga ma dareemeyno kuleyl iyo qabow isku mid ah haddii ay dabeyl leedahay, qoyaan badan ayaa jira ama roob ayaa da'aya. Waxaa laga yaabaa inaan ku jirno maalin jiilaal leh 9 darajo oo heer kulka ah laakiin aan lahayn dabayl, dhammaantood deggan oo qorrax leh oo aan la mid ahayn isla maalintaas oo leh heer kul isku mid ah laakiin da'aya ama dabaysha woqooyi. Waa farqigaas aan ugu yeerno dareenka kuleylka. Ma yahay qabowga ama kuleylka aan aragno iyadoon loo eegin heerkulka dhabta ah deegaanka uu yahay.
Farqigaas u dhexeeya kuleylka ee u dhexeeya dareenka maqaarka, deegaanka nagu hareeraysan iyo xawaaraha dabaysha ayaa ah waxa go’aamiya xaddiga kuleylka aan ka lumineyno jirkeenna waana waxa na dareensiinaya in aan qabowno ama kululaano. Xilliga jiilaalka waxaan ognahay in isku darka qabowga iyo dabaysha meelaha ugu badan ee jidhkeenu soo gaadho ay tahay waxa go’aamiya xaddiga kuleylka aynu lumino. Taasi waa sababta ay muhiim u tahay in la xidho dhar diirran si loo yareeyo dusha sare ee u soo ifbaxaya isbeddeladaan heerkulka iyo luminta kuleylka jirka. Caadi ahaan, qaybaha jirka ee sida ugu badan ugu soo ifbaxay dareenkan kuleylka ah waa gacmaha, wejiga iyo, mararka qaarkood, cagaha.
Xilliga jiilaalka dabaysha iyo qoyaanku waxay si aad ah u saameeyaan mootada
Dareenkan kuleylka ah wuxuu kicinayaa xiisaha iyo xiisaha muwaadiniinta, maadaama mararka qaarkood iyo soo noqnoqoshada soo noqnoqda, waxaan isku aragnaa maalmaha jiilaalka oo aan eegeyno heerkulbeegga oo aan ilaalinayno heerkul aad u qabow. Si kastaba ha noqotee, waan qabow nahay. Tani waa sababta oo ah haddii ay jiraan qoyaan badan ama dabayl qabowWaa inaan sifiican isku duubnaa maxaa yeelay xaaladaha ugufiican ayaa jiri doona si maqaarku u lumo kuleylka jirkeena.
Marka, soo koobitaan waxaan ku qeexi karnaa dareenka kuleylka sida heerkul ku saleysan tusmeynta kuleylka jirka oo ay keento isku darka heerkulka, dabaysha iyo, in yar, huurka.
Waxaan ognahay in dareenka qabow ama kuleylku uu kala duwanaan karo iyadoo kuxiran xaaladaha cimilada ee dabaysha, huurka, iwm. Laakiin sidee loo qaboojiyaa dabeylaha
Waxaa jira jadwallo xisaabiya dareenka kuleylka oo ku saleysan xawaaraha dabaysha iyo heerkulka. Sida iska cad hadaan ereyga qabow dabaysha u dhigno sidii wax shakhsiyan ah, miisaskaasi wax badan oo faa'iido ah ma yeelan lahayn. Taasi waa, qof kasta wuxuu leeyahay aragti u gaar ah iyo adkeysi marka uu wajahayo qabow iyo kuleyl. Mararka qaarkood, waxaa jira dad geli kara gacmo gaab 10 ° C ah iyo kuwo kale oo heerkulka isku mid ah u baahan hoy badan oo dusha ah. Tani macnaheedu maaha in heer-kulka deegaanku noqon karo 10 ° C, laakiin dareenka kuleylka, dabaysha ama xaaladaha qoyaanka awgood, waa 7 ° C. Taasi waa, inkasta oo heerkulka dhabta ahi yahay 10 ° C, innaga waxaan u aragnaa inay tahay 7 ° C.
Tusaale ahaan, sida ku cad miisaskan, heerkulkeedu yahay 0 ° C iyo dabayl deggan, malaha ma dareemi doonno qabow badan haddii aan si diirran u labbisanno. Si kastaba ha noqotee, heerkul isku mid ah laakiin leh dabayl qiyaastii 40 km / saacaddii ah, dareenka kuleylka ee aan yeelan doono wuxuu noqon doonaa -15 ° C wuuna sii qabownaan doonaa. Xiisad ahaan, haddii aan joogno 0 ° C iyo dabaylo ka badan 65 km / saacaddii waxay nagu keeni kartaa dhibaatooyin caafimaad.
Xisaabinta dareenka kuleylka ma fududa, maxaa yeelay waxaan eegaynaa miisaska waana taas, laakiin sidee ayaa loo xisaabiyay qiimayaashan? Hagaag, dabayaaqadii 1930s, sahamiyaha Paul Siple waxay dejisay qaab loo raacayo qaaciddada ugu horreysa ee xisaabeed ee xisaabinta dareenka kuleylka tan iyo markii ay aragtay in aagagga cirifka, haddii heerkulka hooseeya lagu daro dabeylaha xoogga leh, qabowgu wuxuu noqday mid soo dhowaanaya sidaa darteedna xaalado khatar badan ayaa la abuuray .
Qaacidadan ayaa la hagaajiyay sanadihii la soo dhaafay ilaa laga gaarayay halkii ugu dambeysay sanadkii 2001 iyada oo loo marayo is-afgarad u dhexeeya saynisyahano u dhashay Canada iyo Mareykanka.
Haddii aan kudarno qiyamka qaaciddadayada waxaan awood u yeelan doonnaa inaan saadaalino heerkulka aan dareemi doonno markii aan baxeyno, qaabkan ayaan ku ogaan doonnaa sida ugu wanaagsan ee aan u labbisto si aan u ahaano qabow sida ugu macquulsan ugana fogaano hargabka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Ciencia » Waa maxay qabowga dabaysha sideese loo xisaabiyaa?
Taasi waa hab lagu maareyn karo, maxaa yeelay dareenka kuleylka ah wuu ku kala duwanaan karaa qof kasta, waxay qaadataa kombuyuutar aad u sarreeya si loo dhexdhexaadiyo dareenka dadweynaha.
marka laga reebo, dareenka kuleylka ah lama xiriirin cadaadis, sidaa darteed laguma dhexgeli karo dareemo raaxo, ladnaan, walaac, iwm., dareemo aad u qeexan oo loogu talagalay 5 dareenkeenna ...
Ku jawaab hector h sprenger
Shimbiraha kuleylaha ah ee u hanjabay isbedelka cimilada
Bulshada #PorElClima waxay kudareysaa in kabadan 700 hay'adood si loo xakameeyo isbedelka cimilada